သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဌာန | Ministry of Communications And Information Technology
. MMNLP focused on Statistical Machine Translation (SMT) on March 2010.
. SMT is automatically aligning words and phrases within sentence pairs inaparallel corpus.
. Probabilities are determined automatically by trainingastatistical model using the parallel corpus.
. We apply SMT using Moses.
. The BLEU score of the system is 9.3%
- Asian Applied Natural Language Processing for Linguistics Diversity and
- Language Resource Development (ADD) http://www.tcllab.org/
- ADD-1 Program: Introduction to NLP , August 21 - September 1, 2006
- ADD-2 Program: Morpho-Syntactic Analysis, March6- 14, 2007
- ADD-3 Program: Studies on Speech – Image Processing, February 25 – March 2, 2008
- ADD-4 Program: "Language Resource technology"
- Morpho-Syntactic Analysis, Annotation, Tools, and Implementation, February 23 – 27, 2009 ,
- ADD#6 and Asian WordNet Meeting Phuket, Thailand December 6-9,2010. www.asianwordnet.org
. Parallel Corpora with POS tagging.
. Annotated parallel corpus.
. English Vs Myanmar Machine Translation.
. Building WordNet
. Participate in Asian WordNet
. Multi-lingual Machine Translation.
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ တိုးတက်လာတာနှင့်အမျှ လူသားတို့သည် ကွန်ပျူတာတွင် မြင်တွေ့နေရသော အင်္ဂလိပ်စကား လုံးများ အပြင် မိမိတို့နေ့စဉ် ပြောဆိုသုံးစွဲနေကြသော ဘာသာစကားလုံးများ မြင်တွေ့ အသုံးပြုနိုင်အောင် Localization လုပ်ဆောင်လာကြသလို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားသာမက မိမိတို့နေ့စဉ် ပြောဆို သုံးစွဲနေကြ ဘာသာစကား (Natural Language) များဖြင့် အသုံးပြုနိုင်အောင် Natural Language Processing (NLP) လုပ်ငန်းများကို ကြိုးပမ်းလာကြပါသည်။ ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာနစ် အကောင်အထည် ဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များသည် အမျိုးသားအဆင့်လုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည့်အတွက် အားလုံး ပူးပေါင်း ပါဝင်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
၀က်ဆိုက်တွင် Myanmar NLP Research Lab ၏ လက်ရှိအကောင်အထည်ဖော်နေသော သုတေသနလုပ်ငန်း များနှင့် ပြီးစီးသွားသော သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဖော်ပြထားပါသည်။
NLP ကိုစိတ်ဝင်စားသော သုတေသီများ၊ ဘာသာဗေဒပညာရှင်များ နည်းပညာရှင်များအားလုံး၏ အတွေ့အကြုံ များ၊ နည်းပညာ များနှင့် ဆွေးနွေးအကြံပြုချက်များအားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ မြန်မာစာတတ်မြောက်သူတိုင်း ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြုနိုင်၍ သတင်းအချက်အလက် များ ရယူအသုံးချနိုင်ရန်၊ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ကွန်ပျူတာသုံးစနစ်များကို မြန်မာဘာသာဖြင့် အသုံးချနိုင်ရန် စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အကောင် အထည်ဖော်ရန် ကျန်ရှိနေသော လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံစစ်ဆေးခြင်း၊ ကမ္ဘာသုံးဘာသာစကား အမျိုးမျိုးကို မြန်မာ ဘာသာသို့ ကွန်ပျူတာဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၊ စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အဆင့်မြင့်မြန်မာစာသုံးစနစ်ကို ပိုမိုထိရောက်မြန်ဆန်စွာ အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးချုပ်ရုံး၏ ၁၄-၁၁-၂၀၀၅ ရက်နေ့စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၃၅/၂၀၀၅ ဖြင့် အီလက်ထရောနစ် အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ၀န်ကြီး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးစီးသော “ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာ စနစ်” ကိုတိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းတာဝန်များအလိုက် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၄)ဖွဲ့ကို ထပ်ဆင့်ဖွဲ့စည်း လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
ကွန်ပျူတာသုံး ဘာသာပြန်စနစ်၏ လုပ်ငန်းအခြေအနေ
ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို အောက်ပါလုပ်ငန်းစီမံချက်အတိုင်း အဆင့် (၄) ဆင့်ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(၁) အခြေခံမြန်မာစာသုံးစနစ် Basic Language Support (Enabling Kit)
- Typing and Editing
- OS Interface in Myanmar
- Office Interface in Myanmar
- Local setting (Date,Time,Currency)
(၂) အဆင့်မြင့် မြန်မစာသုံးစနစ် အဆင့် ၁ Advanced Support Level 1
(၃) အဆင့်မြင့် မြန်မာစာသုံးစနစ် အဆင့် ၂ Advanced Support Level 2
- MUI (Multiple User Interface)
(၄) အဆင့်မြင့် မြန်မာစာသုံးစနစ် အဆင့် ၃ Advanced Support Level 3
- Hand Script Recongnition
အထက်ပါ လုပ်ငန်းစီမံချက်များကို Microsoft (MS) Platform မှာသာမက Open Source Software (OSS) Platform မှာ လုပ်ကိုင်ရရှိအောင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပထမဦးစွာ အခြေခံ မြန်မာစာသုံးစနစ်မှ Typing and Editing (ကွန်ပျူတာသို့ မြန်မာစာရိုက်သွင်းခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ခြင်း) အတွက် ISO 10646 အရသတ်မှတ်ပြီး Unicode Space တွင် သတ်မှတ်ပေးခဲ့သော စံအတိုင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ဤတွင် Unicode Consortium မှ စံသတ်မှတ်ခြင်းသည် Code Point သတ်မှတ်ပေးရုံသာမက စာလုံးပေါင်း ပေါင်းရာတွင်လည်း စာလုံးပေါင်းမတူပါက စာလုံးအတွက် သတ်မှတ်ပေး သော နံပါတ်တွဲမတူညီစေသော Encoding Sequence ကိုပါသတ် မှတ်ပေးပါသည်။
ရရှိထားပြီး စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီပြီး Unicode Technology ကို အသုံးပြုထားသော မြန်မာစာလုံး စနစ် တီထွင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြရာ MS Windows OS တွင် လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်လုပ်ကိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါသောကြောင့် ကမ္ဘာတွင် တစ်ဟုတ်ထိုး ပြန့်ပွားလာနေသော Open Source Software (OSS) Platform မှ Linux OS တွင် အသုံးပြု၍ရသော M17N မြန်မာစာလုံးစနစ် (Font) ကို တီထွင်စမ်းသပ်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြရာ၊ “လင်းနပ်စ် မြန်မာစာ အထောက်အကူပြုစနစ် (စမ်းသပ်အဆင့် ၁)” (Myanmar Enabling Kit (Beta Version)) CD ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်ဇန်န၀ါရီလ ၊ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် မြန်မာအိုင်စီတီ ရက်သတ္တပတ်တွင် အောင်မြင်စွာ ဖြန့်ချိနိုင်ခဲ့ပါ သည်။ ထို Distribution တွင်
(၂) မြန်မာစာ စာစီစာရိုက်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
(၃) မြန်မာဘာသာဖြင့် Date/Time Setting များပြုလုပ်ခြင်း
(၅) မြန်မာဘာသာသုံး အင်တာနက် Browser ဖြင့် အင်တာနက် ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
(၆) မြန်မာဘသာဖြင့် အီးမေးလ်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
1 |2|3|4Online Service